प्रदेश २ : जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी बेडमा छटपटाउँदै, स्वास्थ्यकर्मी मस्त निन्द्रामा - हाम्रो जनकपुर
वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमतबाट थप एक महिलाको मृत्यु
अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर नक्सा प्रिन्ट,आज प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन
नेपालको पासपोर्ट विश्वमै अत्याधिक कमजोर, सबैभन्दा कमजोर १० वटाको सूचीमा पर्‍यो
श्रीमतीको ह,त्या गरी दुबई गएका एक जनालाई त्यहीँ पुगेर ल्यायो प्रहरीले
तराई जिल्लामा आज टाउकोमा पानी थपि थपि जुडशितल मनाउँदै
ट्रकले मोटरसाइकल ठक्कर दिएपछि एकजनाको मृत्यु, एक अस्पताल भर्ना
आजदेखि इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको रमजान पर्व सुरु
शहिद परिवारसंग खेलवाड, मधेश भवनमा विरोध प्रदर्शन ..
राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड जितेपछि धनुषामा विद्यार्थीमाथि कुटपिट
धनुषा :१७ बर्षिया किशोरीलाई बलात्कार , एकजना पक्राउ
जनकपुर: हाेटल अगाडि एक साधु बाबा मृत अवस्थामा फेला
प्रदेश २ : जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी बेडमा छटपटाउँदै, स्वास्थ्यकर्मी मस्त निन्द्रामा
२०७६ चैत्र २६, बुधबार ०५:३२
जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका वाडा नम्बर -२ का मुस्तकिन साफिका १० वर्षीया छोरी रुक्सानालाई सर्पले टोक्यो मंगलबार बारीमा सर्पदंशको शिकार भएकी उनलाई परिवारका सदस्यले दिउँसो १ बजेतिर जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालकेा आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याए । तर उनलाई हेर्न चिकित्सक आएनन् ।
झण्डै एक घण्टापछि स्वास्थ्यकर्मीले सलाइन पानी चढाए । त्यसपछि कोही पनि हेर्न नआएको पिता मुस्तकिनले बताए ।
त्यही अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका छन् रक्तअल्पताका बिरामी जितेन्द्र यादव । २२ वर्षीय यादव सिरहाको सिरहा नगरपालिका १३ फुलबरियाबाट मंगलबारै आएका छन् । उनलाई पनि चिकित्सकले हरेनन् ।
प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तेस्रो बिरामी एक महिला थिइन् । आफ्नो नाम बताउन अस्वीकार गरेकी उनले आफूलाई एकदमै कमजोरी लाग आएको सुनाइन् । तर चिकित्सकले हेर्दै नहरेको उनको गुनासो छ ।
कुनैकुनै बेला स्वास्थ्यकर्मी आउने गरेको र औषधि वा इन्जेक्सन दिन पनि बोलाउन जानु परेको बिरामीहरुले बताउँछन् ।
मस्त निन्द्रामा स्वास्थ्यकर्मी
बिरामीहरुले कसैले हेर्न नआएको गुनासो गरिरहँदा आकस्मिक कक्षमै एक स्वास्थ्यकर्मी भने मस्त निन्द्रामा भेटिएन । गालामै पटक-पटक लामखुट्टेले टोक्दा बेलाबेला हात धपाउँथे र फेरि निन्द्रामा मस्त हुन्थे । लामखुट्टेले निकै सताएपछि व्यूँझिए ।
आफ्नो अगाडि हामी उभिरहेको थाहा पाएपछि भने निकै आत्तिए । आफ्नो नाम जगदीश साह बताएका उनले पद खुलाउन मानेनन् ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव भने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक काममा व्यस्त रहेको बताए । ‘सबै आ-आफ्नो काम गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘बिरामीसँगै स्वास्थ्यकर्मी बसिरहन त सक्दैन ? सबैले राम्रोसँग ड्युटी गरिरहेका छन् ।’
यादवले आकस्मिक उपचारका लागि आउने कुनै पनि बिरामीलाई कुनै किसिमको समस्या हुन नदिने समेत बताए ।